I-DemandJump: Ukumaketha okubikezelayo nobuhlakani bokuncintisana | Martech Zone
I-DemandJump: Ukumaketha okubikezelayo nobuhlakani bokuncintisana
NgeSonto, ngoMashi 6, 2016 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
I-Intanethi ingumthombo omangalisayo wedatha okuthi, uma ivunjiwe, ingaveza ulwazi oluningi. Kepha ngokusho Inhlolovo ye-CMO yalo nyaka, ingxenye eyodwa kwezintathu kuphela zabathengisi abakwaziyo fakazela umthelela esetshenzisweni sabo sokumaketha, yingxenye kuphela abakwazi ukuthola okuhle umqondo wekhwalithi womthelela, futhi cishe ama-20% bayakwazi ukukala noma yimuphi umthelela noma yini. Akumangalisi ukuthi ukumaketha analytics izindleko kulindeleke ukuthi zikhuphuke ngama-66% eminyakeni emithathu ezayo.
Njengoba amaphesenti ohambo jikelele lwabathengi nabathengi lokuhamba luhamba ku-inthanethi, abathengisi bayabona ukuthi badinga ukuthola umyalezo phambi kwezithameli ezifanele lapho bekhona. Ukumaketha kokuqukethwe, ukumaketha kwezokuxhumana nabantu, nokukhangisa okunomthelela kuqhubeka nokukhuphuka njengoba ezinye iziteshi zokumaketha zifinyelela ukugcwala.
IsidingoJump kuyintuthuko enkulu ekuhlakanipheni kokumaketha okubikezelayo, okuvumela abathengisi ukuthola amathuba wokukhangisa, ukulandelela ukunyakaza kwabaqhudelana nokusheshisa ithrafikhi yakho nokuguqulwa kwakho. Ukubheka ngokushesha kudeshibhodi yabo kukunikeza ukubuka konke kokubuka konke kokudluliswa kwakho namathuba, kufaka phakathi ukuhola okuholela, izindaba namathuba we-PR, amathuba e-eCommerce, amathuba wokusebenzisana, amabhulogi namathuba wokuqukethwe, nokuningi.
Ubunhloli Bokumaketha Okuqukethwe
Usebenzisa amathuluzi wobuhlakani bokuqukethwe beDemandJump, ungabheka konke okuqukethwe okwenziwa izimbangi zakho, ukuthi kusebenza kahle kangakanani, futhi uze ukhombe nemithombo yethrafikhi yokudlulisela kokuqukethwe kwabo.
Lokhu kungakusiza ukukhomba abathonya kanye namasayithi abhekisayo azophinde aqhube ithrafikhi yakho. Ipulatifomu linikezela nangamathuluzi okuphatha ubudlelwane ukuze ugcine uphathe futhi uhlole ubudlelwano obukhiye nabathonya bakho.
I-sauce eyimfihlo ngemuva IsidingoJump ukuqoqwa kwemininingwane esemqoka yokuncintisana ongayikhothoza endaweni yesikhulumi ukuze uqondise okuqukethwe kwakho namasu wokuphromotha. Cabanga ukuthi unemali oyisebenzisayo yokumaketha kumanethiwekhi amaningi wezikhangiso, ukubonisa amanethiwekhi wesikhangiso, uxhaso nezinye iziteshi. I-DemandJump ingakusiza ukukhomba ukuthi imiphi imithombo eshayela ithrafikhi nokuzibandakanya, hhayi amanethiwekhi wesikhangiso abawasebenzisayo. Baze banikeze ne-algorithm yabo yokuthola amaphuzu ukuze babeke phambili amathuba azoba nomthelela omkhulu.
Ukuqonda isitaki sokukhangisa izimbangi zakho ezisebenzisa amasu azo kuzokusiza ukuthi uqonde amapulatifomu owadingayo ukuze uncintisane nawo.
With IsidingoJump, Abakhangisi abaku-inthanethi banoma yiluphi uhlobo lwebhizinisi - kusuka ku-e-commerce, ekushicilelweni, kwezebhizinisi kuya kweyebhizinisi, kuya kokungenzi inzuzo kungathola imininingwane ebalulekile ngecebo labo lokukhangisa leziteshi eziningi. Bona lapho uhlangana khona nabantu oqhudelana nabo nokuthi yiziphi izinyathelo okufanele uzithathe ukuze ukhule.
Izwa IsidingoJump in Action!
Ukudalulwa: Ngisebenze eduze nomsunguli uShawn Schwegman kule minyaka edlule, sisebenzise isixazululo semizamo yethu, futhi sakha ukubambisana okuqhubekayo IsidingoJump.
Tags: ubuhlakani benethiwekhi yesikhangisokokujoyinaukuhlakanipha kokuncintisanaUkukhangisa Okuqukethwefuna gxumafuna ukweqaubuhlakani bokumaketha kwedijithalie-commerceezokuhweba ngekhompyuthathola abathonyaUngabathola kanjani abathonyaumthelelaipulatifomu yokuthonyaukuhola isizukulwaneubuhlakani bokumakethaukuhanjiswa kwezindabai-analytics yokubikezelaubuhlakani bokuqagelaukumaketha okubikezelayoubudlelwane bomphakathiukudluliselwa kwezimoto
I-Spoutable: Izikhangiso Zomdabu Zezivakashi Ezihambayo